प्रयोग बढ्दो, आम्दानी घट्दो ! – Digital Khabar
१६ फाल्गुन, काठमाडाैं । सन् २०१९ मा आफ्नो एक जना ग्राहकबाट औसतमा दुई सय ६९ रुपियाँ आम्दानी गरेको एनसेलको त्यस्तो आम्दानी सन् २०२० मा प्रतिग्राहक दुई सय १४ रुपियाँमा सीमित भयो ।
सोही वर्ष कुल आम्दानीको २२ प्रतिशत डेटा बिक्रीबाट प्राप्त गरेकोमा कम्पनीको यो हिस्सा बढेर सन् २०२० मा २४ प्रतिशत पुग्यो ।
पछिल्लो वर्ष एनसेलको आम्दानी १२ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीले घटेको छ । आम्दानी ४१ अर्ब ९२ करोड रुपियाँमा झरेको छ । जबकी सन् २०१९ मा कम्पनीले ५४ अर्ब १६ करोड रुपियाँ आम्दानी गरेको थियो ।
नेपालको दूरसञ्चार बजारमा ९८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यी दुई कम्पनीका सेवाको प्रयोग निरन्तर बढ्दो छ ।
निरन्तर सेवा विस्तारमा लगानी गरिरहेका कम्पनीहरूले आफ्नो बजार घटेको दाबी सार्वजनिक रूपमा पनि गरेका छैनन् । निष्क्रिय प्रयोगकर्ताको नाममा रहेका सिमकार्ड एक वर्षपछि अरूलाई नै बिक्री गर्न सक्ने प्रावधानका कारण तथ्याङ्कमा दुवै कम्पनीका ग्राहकको सङ्ख्या घटेको देखिए पनि समग्रमा दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग भने घटेको देखिँदैन ।
प्रयोग बढिरहँदा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक आम्दानी सङ्कुचनको अवस्थामा किन छन् त ? दुवै कम्पनीले यसलाई कोरोना सङ्क्रमणको असरको कारण मानेका छन् । एजियटाले आफ्नो प्रतिवेदनमा कोरोना सङ्क्रमणका कारण जारी गरिएको लकडाउनका कारण भौतिक सम्पर्क नहुँदा ब्यालेन्स राख्ने, सिमकार्ड तथा अन्य उपकरणको बिक्री घट्दा आम्दानी प्रभावित भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै लकडाउनकै अवस्थामा निःशुल्क बोनस रिचार्ज गर्नुपर्ने, कम शूल्कमा डेटा उपलब्ध गराउनुपर्ने नियामकको निर्देशनले आम्दानी घटेको जनाएको छ । टेलिकमको पनि उस्तै कारण छ । कोरोना सङ्क्रमणका कारण निकै कम मूल्यमा डेटा प्याकेज उपलब्ध गराउँदा डेटाको प्रयोग बढे पनि राजस्व घटेको कम्पनीले जनाएको छ । त्यस्तै रोमिङ सेवामा आएको गिरावटले पनि राजस्व प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ ।
अबकाे राजनैतिक निकासकाे बाटाे